Atsaharo ny herisetra atao amin’ny vehivavy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny Sendika sy ny 8 Mars 2021
Atsaharo ny herisetra atao amin’ny vehivavy
Nanangona Rwat il y a 1 moi
8 marsa, Andro anentanana ho an’ny fanajana ny zon’ny vehivavy, inona no azo ambara ? Mbolanomena, sekretera jeneralin’ny Randrana sendikaly no mitondra ny heviny sy ny an’ny sendika misy azy.
Samy nankalaza ny andron'ny 8 marsa ireo vovonana na fikambanam-behivavy tany amin’ny sehatra misy azy tsirairay avy tany. Ho an'ny Randrana sendikaly manokana, dia nanao hetsika, izay nampiavaka azy, ka diabe arahana fanamafisam-peo no nentina nanentana ny mpiasa. Ny lohahevitra novoizina tamin’ny ity taona ity dia hoe "Atsaharo ny herisetra atao amin’ny vehivavy". Raha ny fitarainana voarain'ny Randrana Sendikaly mahakasika ny herisetra amin'ny endriny samihafa, dia maro tokoa, ka izay no nahatonga ny fandraisana io lohahevitra io. Etsy andaniny, midradradradra fahavitan-tenan'ny vehivavy isika, kanefa, tsy misy vehivavy afaka hivelatra ao anaty tebiteby lava satria iharana herisetra. Rehefa korontana lava no iainana dia miteraka aretina, hany ka misy fiantraikany amin'ny fahafaha-mamokatra avy eo. Ankoatra izany dia manaitra ny fanjakana ny Randrana sendikaly mba hanaovan'ny fanjakana sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena laharana faha 190, milaza ny hamongorana ny herisetra eny amin’ny toeram-piasana.
Tsapa fa nirongatra ny herisetra mahazo ny vehivavy ao an-tokantrano nandritra iny fihibohana iny, ary manampy trotraka izany ny herisetra mahazo any amin’ny toeram-piasana. Indrindra fa ny herisetra ara-moraly amin'ny fomba fiteny mandratra sy manambany isan-karazany. Miteraka fahalemen-tsaina sy rarin-tsaina ho an'ireo izay iharany. Anisan'izany ny fampitahorana ny amin'ny fandroahana isaky ny misokatra ny vavan'ireo tompon'andraikitra apetraky ny mpampiasa amin'ny fitantanana. Ny fampitangoronana olona eo amin'ny vavahady, mody fitahina amin'ny fisiana tolotrasa (izay tsy misy akory), kanefa entina hampihorohoroana ireo mpiasa amperin'asa fotsiny ihany. Hilazana fa rehefa tsy manao izay mahafaly ny mpitantana dia roahana tsy misy hatak'andro satria betsaka ny mitady asa. Ny fanerena ankolaka na mivantana ny vehivavy hiasa alina, na asa tsy mifanaraka amin'ny toe-batany na ny toe-pahasalamany, ka rehefa tsy mety amin'ilay vehivavy dia tadiavina ny hirika hanenjehana sy handroahana azy. Marobe aza ireo vehivavy terena hanao taratasy fanekena fa hanao an-tsitrapo asa tsy tokony hataony akory. Ao indray ireo terena hiasa ivelan'ny ora fiasana kanefa tsy aloan'ny orinasa ny tambin-karamany, io ilay atao hoe "asa voanjo". Ny tsy fahazoana miteny na manazava moa tsy lazaina intsony, fa avy hatrany dia kilasiana ho tsy fanajana lehibe ka mahavoaroaka tsy misy fampandrenesana... Farany dia marobe ireo vehivavy roahan'ny orinasa ankehitriny, indrindra fa ireo izay efa somary nahazoazo taona, kanefa sady mbola ananan'ny banky trosa, no nitrosa tamin'ny CNAPS nandritra ny fihibohona. Rehefa roahana izy ireo dia tsy misy ho raisiny intsony ny "solde de tout compte" fa avy hatrany dia tazomin'ny orinasa handoavana ny trosa amin'ny CNAPS... Santionany amin'ny iainan'ireo vehivavy Malagasy izay tsy maintsy mivoaka mitady izay hamelomany ny ankohonana ireo. Izany no mahatonga ny Randrana Sendikaly mivoy ny hametrahana lalàna ahafahana mifehy ireo karazana herisetra mamohehatra amin'ny fampivelarana ny maha olona sy ny fampandrosoana ny firenena. Ny anjara biriky entin'ny Randrana sendikaly hanampiana ny mpiasa, indrindra ny vehivavy dia ny fanentanana azy hiditra sendika satria ny sendika dia manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampivelarana ny maha olona manontolo. Amin'ny alalan'ny fifampiofanana sy fifanakalozan-kevitra, ahafahan'ny vehivavy mahalala ny herisetra mianjady aminy, ka handraisany fanapahan-kevitra. Ny sendika kosa mijoro ho tan-tsoroka amin'ny dingana rehetra arakaraka ny safidin'ny mpiasa. Mandroso ny firenena rehefa foana ny herisetra amin'ny endriny rehetra, indrindra ny atao amin'ny mpiasa mpamokatra, kitro ifaharan'ny toe-karena.
Energies renouvelables : La MCB et l’AFD signent le démarrage des lignes de crédit SUNREF à Madagascar - il y a 9 heures
Kabary politika : Valin-kafatra politika tao Fianar - il y a 24 jours
Covid 19 : Laingo Andriantolofana, mpisehatra politika maneho ny heviny - il y a 25 jours